Mayelana NATHI - Dongguan Yong Fang Electronics Technology Co., Ltd.
I-Dongguan Yong Fang Electronics Technology Co, Ltd
kuyintoomunye nomkhiqizi okhokhelwayo kusuka Donguan, Guangdong, China. Sineminyaka engaphezu kwengu-23 yokuhlangenwe nakho kwensizakalo yokukhiqiza ye-OEM ne-ODM yamazwe omhlaba kuma-headphone angenantambo nangama-earphone.
Efektri yethu engamamitha ayisikwele ayi-6000 futhi ifakelwe ngokuphelele, kunemigqa engu-8 yemikhiqizo ekhiqizwe kahle. Sekukonke, sinabasebenzi abanekhono nabanolwazi abangaphezu kuka-120. Umthamo wokukhiqiza wansuku zonke ufinyelela kuma-5000-8000 PC. Ngaphandle kwalokho, sineqembu eliqeqeshiwe le-R & D lemiklamo emisha kanye neyokudala, kufaka phakathi onjiniyela be-3D, onjiniyela be-elekthronikhi, onjiniyela be-acoustic, ukuklanywa kwehluzo nokuningi.
Kuyo yonke imikhiqizo evela efektri yethu, ihlolwa ngokuqinile yithimba lethu ngokususelwa ekuthembekeni nasezingeni lokuphepha ebhodini lethu elijwayelekile lokuhlola ukuthembeka, futhi kwemikhiqizo eminingi, ikanye ne-CE, ROHS, Reach, FCC, Sound pressure, KC kanye neminye imibiko yokuhlola noma izitifiketi.
Umgomo wethu ukuthi ube ngumlingani wakho omkhulu wesikhathi eside wokukhiqiza ohlinzeka ngemikhiqizo nezinsizakalo ezinhle. Kuze kube manje, besilokhu sihlinzeka ngokwethembeka nangobungcweti imikhiqizo yasekuqaleni, yokudala neyekhwalithi kanye nezinsizakalo ezihlose ukwaneliseka kwamakhasimende kumakhasimende angaphezu kwekhulu avela emazweni nezindawo ezahlukahlukene ezingaphezu kwezingama-87.